Modem Manager GUI: Ezigbo ngwa maka ijikwa modem USB | Site na Linux
Modem Manager GUI: Ezigbo ngwa maka ijikwa modem USB
na Sistemụ arụmọrụ free na-emeghe, dị ka GNU / Linux, ha na-enwekarị ngwa ọdịnala nke ọtụtụ oge anyị na-amaghị maka ihe dị iche iche, ma na-arụ ọrụ dị oke mma, nhata ma ọ bụ karịa karịa analogues na Sistemụ arụmọrụ onwe ma mechibidoro Windows. Otu n’ime ha bụ Mọdem Manager GUI, ngwa magburu onwe ya nke m na-eji ugbu a.
N’okwu ndị dị mfe ma kwụ ọtọ, a ga-ekwu ya Mọdem Manager GUI Ọ bụ magburu onwe ọzọ eserese eserese (njedebe n'ihu) maka modem-manager (ModemManager) ọrụ (daemon), nke na-ahụ maka ijikwa ojiji nke USB modem na njikọ na Internet banyere GNU / Linux Distros.
Ugbua na oge gara aga, ọkachasị obere afọ 2 gara aga, gbasara akwụkwọ akpọrọ "Mọdem njikwa: Ngwa maka njikwa nke Mọdem na Linux" anyị na-akọwa akụkụ ya nke ọma n'ụzọ zuru ezu, nke anyị ga-emikwu ma melite taa, mana n'ụzọ ọrụaka na ụzọ ọhụụ.
Njikwa Mọdem: Ngwa maka njikwa nke Mọdem na Linux
Ọzọ gara aga post ebe anyị kwuru okwu na-atụ aro ya tupu, na ngalaba nke «Nkwado maka ngwaọrụ njikọ ịntanetị USB » Ọ bụ dị ka ndị a:
DEBIAN 10: Kedu ngwugwu ndị ọzọ bara uru mgbe ị wụnye?
1 Modem Manager GUI: USB modem management ngwa na Linux
1.1 Gịnị bụ Modem Manager GUI?
1.2 Atụmatụ Ugbu a
1.3.5 Linux nke Chakra
1.3.6 Linux Mageia
1.4 .Dị ugbu a
1.5 Ihuenyo gbaa
Modem Manager GUI: USB modem management ngwa na Linux
Gịnị bụ Modem Manager GUI?
Ugbu a, na-ehota ya mmepe ha ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, a kọwara ya dị ka:
"Ihe ngosi eserese eserese nke sitere na GTK + dakọtara na ọrụ nke Modem Manager, Wader na oFono sistemụ, nwere ike ịchịkwa ọrụ akọwapụtara nke modem brọdband EDGE / 3G / 4G, na-enyocha nguzo nke kaadị SIM, izipu ma ọ bụ ịnata Ozi SMS, na ijikwa oriri nke okporo ụzọ data mkpanaka, n'etiti ọtụtụ ọrụ na akụrụngwa".
Atụmatụ Ugbu a
Mepụta na jikwaa mobile brọdband njikọ.
Ziga ma nata ozi SMS ma chekwaa ozi dị na nchekwa data.
Bido arịrịọ USSD ma gụọ azịza (yana iji mmemme mmekọrịta).
Lelee ozi ngwaọrụ: aha onye ọrụ, ọnọdụ ngwaọrụ, IMEI, IMSI, ọkwa ọkwa.
Nyochaa netwọkụ mkpanaka dị.
Lelee ọnụ ọgụgụ okporo ụzọ ekwentị ma setịpụ oke.
N’etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Ngwungwu (ọnụọgụ abụọ) nke Mọdem Manager GUI enwere ike ibudata ya, chikota ya ma tinye ya na nke kachasi GNU / Linux Distros na ya nkwekọrịta, Otú ọ dị, dị iche iche na nsụgharị ma ọ bụ ndị ọhụrụ anụ nwere ike nweta n'ime ụlọ ọrụ gọọmentị ma ọ bụ ndozi dakọtara nke ọtụtụ n'ime ha, ya mere na a dị mfe iwu ịtụ site na ọnụ ma ọ bụ njikwa, ị nwere ike iwunye ụdị dị na ha. Ọmụmaatụ:
dnf wụnye modem-manager-gui
sudo apt-nweta wụnye modem-manager-gui
apt-nweta wụnye modem-manager-gui
pacman -S modem-manager-gui
Linux nke Chakra
ccr -S modem njikwa-gui
zypper na modem-njikwa-gui
Ugbu a, Mọdem Manager GUI, na-aga n'ihi na 0.0.20 mbipute nke eweputara naani onwa gara aga. Otú ọ dị, onwe m, m na-eji mbipute dị maka Linux MX gịnị bụ 0.0.19 mbipute, nke etinyegoro ma rụọ ọrụ zuru oke na m omenala na kachasị respinakpọ Ọrụ ebube.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu gbasara ngwa a kwuru, ị nwere ike ịkpọtụrụ njikọ ndị a:
Ya mere na anyị nwere ike ịhụ na omimi niile njirimara ya na ikike, anyị ga-egosi ndị na-esonụ screenshots nke 0.0.19 mbipute, nke m na-eji ugbu a, nke na-enye m ohere ijikwa m Movistar Huawei E173 USB Mọdem enweghị isi nsogbu, karịsịa ndị mezie oriri data kwa ụbọchị na kwa ọnwa iji nwee ike iji nke m atụmatụ data banyere Linux, dị ka ọ na-adị mfe ebu na mbụ software kere ka Windows.
A. Ngwaọrụ Nhọrọ
B. Tinye Nhọrọ Ngwaọrụ
C. SMS Ozi nhọrọ
D. USSD Ozi nhọrọ
E. Nhọrọ teknụzụ nke ngwaọrụ na njikọ
F. Nhọrọ nyocha maka njikọta achọpụtara
G. Nhọrọ nyocha okporo ụzọ
H. Nhọrọ ọnụọgụ okporo ụzọ
I. Nhọrọ njikwa kọntaktị
J. Mmasị -> Omume
K. Mmasị -> Ozi SMS
L. Mmasị -> Eserese
M. Mmasị -> Modul
N. Mmasị -> Peeji
Dị ka ị pụrụ ịhụ na ọ bụ magburu onwe ngwá ọrụ, ọma zuru ezu na nke ahụ ga-abara ọtụtụ ndị uru, ma ọ bụrụ na ha chọrọ ya, wụnye ya ma jiri ya.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Modem Manager GUI»nke a magburu onwe ọzọ nke eserese eserese (n'ihu njedebe) maka ọrụ (daemon) nke njikwa-modem (ModemManager), nke na-ahụ maka ijikwa ojiji nke modem USB yana njikọ Internetntanetị na GNU / Linux Distros, nwere nnukwu mmasị na ịba uru. , Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Modem Manager GUI: Ezigbo ngwa maka ijikwa modem USB
Franco Castillo kwuru dijo
Kedu modem ị kwadoro maka Argentina nke na-eji band 4, 7 na 28? Ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, agbụ 2 na 8.
Zaghachi Franco Castillo
Daalụ, Franco. Daalụ maka okwu gị. Onwe m, enweghị m ike ịgwa gị ụdị ụdị ngwaọrụ modem USB dị maka Argentina ma dakọtara na ndị agha ahụ. Enwere olile anya na onye ọzọ na - agụ akwụkwọ site na mba ahụ nwere ụdị ozi ahụ ga - enye anyị ya. Successga nke ọma na jisie ike na nke ahụ.
Fedora 34 bu n'uche iwepu nkwarụ SELinux ma kwaga KDE site na Wayland
Nchara, ihe ndị mmepe Linux yiri ka ha kwenyere